Coronavirus Update Survey ဆန်းစစ်ချက်တခု အလျင်အမြန်လုပ်ခြင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပ်ဒိတ်ပို့စ်ကို ဆန်းစစ်မှုလုပ်ကြည့်ပါတယ်။
Daw Mywe Mywe Aung, စုစု လှိုင် and 4.5K others
2.6K Shares ရှယ်သူ စုစုပေါင်း။
4.3K others Likes လိုက်ခ် စုစုပေါင်း။
72 Comments ကွန်မင့် စုစုပေါင်း။
1. Phue Thet မြန်မာပြည်မှာကောဆရာ တစ်နေ့ကဆူလေနဲ့လေဆိပ်အသွားပြန်ကားပေါ်မှာ ဝူဟန်သံသယလူနာဆိုတာဟုတ်ပါသလာဆရာ။ မြန်မာပြည်မှာတစ်ယောက်မှမရှိသေတာလာဆရာ။ သတင်း page တွေကအမှားတွေများလေလို့မေးတာပါရှင့်
Tint Swe မမှန် မသေချာ အမှား အလိမ်များ။ ဆရာသာစာရေးတင်ရင်တော့ တနေ့ကလို့သာရေးမယ်။ တစ်နေ့ကဆိုတာ လဆန်း ၁ ရက်နေ့။
2. Phue Thet Tint Swe ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ခုအဖြစ်ကချောင်းဆိုသံကြားတာနဲ့ကိုကြောက်နေရလို့ပါ။
3. Brang La ကျန်းမာပါစေ ဆရာ
4. Khin Zaw သိခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါဆရာနဲ့မိသားစုဘေးဘယာဝေးကွာပြီးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
5. Ko Nay ကြေးဇူးပါ ဆရာ🙏
6. Meggi Po Tin Thank you Sayar, let me share 🙏
7. Naw Kham WHO ဘာလုပျနလေညျး
8. Daw Thein Win ကြေးဇူးတငျပါတယျဆရာ
9. ကို မြတ် လင်း အောင် ကြေးဇူးတငျပါတယျ
10. April Moe ကြေးဇူးပါဆရာ
11. Thanda Win Kyaw သတငျးတှအေတှကျကြေးဇူးပါရှငျ့
12. Ye Thiha Winn ဆရာ ပထမဆုံးနှငျ့ပဌမဆုံး ဘာကှာပါလဲဆရာ?🙏🙏🙏
13. Thetphone Aungkyaw Ye Thiha Winn ဦးနဝေငျးလကျထကျက သတျပုံကမျြးမှာ ပထမ ဆိုပွီးပွငျလိုကျတာလို့ကွားဖူးတာဘဲအကို
အရငျတုနျးက ပဌမ ဆိုပွီးရေးတယျပွောကွတယျ
14. Ye Thiha Winn ကြေးဇူးပဲညီ
15. Ko Myo Aung ကြေးဇူးပါဆရာခငျဗြ
16. Zin Bo မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ေ၇ာဂါမတွေ့တာအံသြောတယ်သူတို့နိုင်ငံနဲ့နီးနီး လေးကိုနော်သိတဲ့လူများပြောပြပါအုံး
17. သက် ထား ပြောကျကငျးတဲ့ဆေးအမွနျတှေ့ပါစေ
18. Yin Min Aung မြန်မာမှာတော့ မဖြစ်သေးဘူးဆို
19. Ashinsumana Yin Min Aung မသိတာနေမှာ
20. Mg Mg Chit မြန်မာ ရောအခြေအနေကောင်းလားဆရာ
21. Wai Cho Ehhser ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆရာ
22. Soe Soe Shwe thanks.
23. မောင်း အမွနျဆုံးကာကှယျပါပြံနှံကုနျပွီ
24. Ei Khing ကြေးဇူးတငျပါတယျဆရာ
25. စုစု လှိုင် ကနျြးမာပါရစဆရာ
26. Mon Lay အကုန်သေသွားအေးဒါပဲသူများမကောင်းကြံတဲ့ကောင်တွေ
27. Arr Ku Tone Tone ဟုတျကဲ့ပါဆရာ သိခှငျ့ရလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
28. Ah Mon မြန်မာပြည်အတွက်တကယ်ကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်အခုချိန်ထိမြန်မာပြည်ကလုံးဝငြိမ်နေတယ်ဘာသတင်းမှလဲမတက်လာဘူးတကယ်ပဲရောဂါမရှိတာလား
29. Htoo Htoo ဘယ်တက်နိုင်မလဲ မိုးပြိုတော့လဲအများပေါ့
ဘုရားတရားလေးလည်းများများလုပ်ကြပါ မြန်မာနိုင်ငံက ရတနာသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကြောင့် ကာကွယ်မှူလည်းအနည်းအကျဉ်းရှိပါတယ်🙏🙏🙏
30. Du Long မွနျမာကှဂရုကိုမစိုကျကတြာ
31. Bhone Kyaw Bhonekyaw ကြေးဇူးပါဆရာခငျဗြ
32. Aung Min Tun ကျေးဇူပါဆရာ
33. Nay Htet မြန်မာ နိုင်ငံမှာကြ. ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟဘယ်ဆိုးလည်း စမ်းသပ်တဲ့စက်မရှိလို့လားမသိ
34. Hnin NuWai Nay Htet အမျိးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှာစက်ရောက်ရှိပြီးစမ်းသပ်လို့ရနေပါပြီ
35. Thein Gi ကြေးဇူးပါဆရာကွီး
36. Myo Zaw Latt ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာလညျး ရှလေ့တှဆေို ပှဲတျောလတှဖွေဈနတေော့ ပိုသတိထားရမယျထငျတယျဆရာ။
37. Mg Shwe Ngwe မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့သတငျးမှနျကိုထုတျပွနျပေးဖို့နဲ့နိုငျငံခွးသားဝငျထှကျတာတှပှေဲလမျးသဘငျတှကေိုအထူးကွပျမတျသငျ့နပွေီ😤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
38. Poe Ei Ei Thwin Myowinsein Seingyi Myowinsein
39. Kyaw Za ပြျောရှငျမှုဟာ မသိမှုက လာတာတဲ့
40. ဒို့နိုငျငံ ဘာမှမသိတော့ ပြျောလို့ကောငျးတုနျး😁😁
41. Thet Su Naing ကို Zar Ni
42. Ko Kyaw Soe Shein အဲရောဂါကအပူကွောကျတယျမွနျမာကငရုတျသီးကွိုတျတယျငရုတျသီးမြားမြားစားပေးခွငျးဖွငျ့ကိုရိုနာအားကာကှယျပါ😁😁
43. Ei Phyo သတိထားကွပါ
44. Mg Mg Htet Silute Twentyfirst
45. Chaw Po ပိုဆိုးလာနတောဘဲ
46. Daw Cho Cho Nwe မပူပါဘူးသေမယ့်လူကသေမှာပဲရှင်မယ့်လူကရှင်မှာပဲ
47. Tun Min ရှယ်လိုက်ပါပြီဆရာ..
48. Aung Myint Sein ဂြောကျထဲကရြနျ လကျနှဈ့လုံးတောငျမလိုတော့ဘူး။
49. Si Thu ကူးစကျမှုလုံးဝ မရှိသေးသညျ့ မွနျမာနိုငျငံအား အလေးပွု
50. Moethandar မြန်မာပြည်ဒီလိုသွားနေကြတာနာခေါာင်းတောင်စီးတာမတွေ့ရန်ကုန်
51. Su Myat Mon ကြေးဇူးပါဆရာ
52. Min Min ဗုဒ်ဓက ဟောထားတယျ...။ အသကျရှညျခငျြရငျ သီလစောငျ့တဲ့ ။ ကဲ...မငျး သဘောပဲ ။
53. U Khant မနိုင်တော့မှအကုန်ဖွင့်ချမယ်ထင်တယ်အကုန်စမူံတုန်းကုန်တော့မယ်ထင်တယ်နော်
54. နှင်းဆီနီ နတ်သမီး ကျေးဇူးပါ
55. Yan Naing ဒီက လအကွီးတှကေတော့ ဖငျပိတျငွငျးနတေုနျး
56. Hong Sar Mon မြနမာပြည်မှာကူးစက်ခံနေရပြီထင်သာပဲ ဘာအကျိူကြောင်းမှလဲမကြာရဘူ မြန်မာပြည်အတွက်စိုရိမ်းစရာပဲ
57. ကိုကိုချစ်တဲ့ ဘွားတော်လေး ပွဲတော်တွေပိတ်သင့်ပါတယ်တခြားမှာရောဂါတွေဖြစ်နေတာသိရက်နဲ့မလုပ်သင့်ပါအသက်ကအရေးကြီးတယ်
58. Zayar Min ကြေးဇူးပါဆရာ
59. Soe Soe Thant BoBo Win
60. Tin Soe မြန်မာမှာ သဲအင်းဂူ.တိုက်ခွဲ ၃၂.ယောဂီသစ်.စခန်းပွဲပိတ်ထာပဲ.ရှိသေးတယ်.ကျန်တာတွေ အေးဆေးပဲ
61. Daw Khin Myo Nwe ဝူဟန်ရောဂါကိုအမြန်ဆုံးနှိမ်နင်းနိုင်ပါစေအန္တရယ်ကင်းကြပါစေ
62. Nann Yu thanks ဆရာ
63. ပိတောက်မေ ဒုက္ခပ့ါဘဲငရုပ်သီးနဲ့မတဲ့တောဘ
64. Minn Maung ဒီမှာ ပှဲကငျြးပခှငျ့မပေးလို့ ဆိုတဲ့သူတှေ သခြောဖတျကွ...
65. Phyu Kyai Sin မင်ျဂလာပါ ဆရာကွီးရှငျ့
ကွန်မင့်ပေးသူ ၇၂ ယောက်ထဲမှာ
ကျေးဇူးတင်သူ ၂၃ ယောက်။
ဘလော့ရသူ ၂ ယောက်။
ကျန်သူတွေက သူတို့အမြင်တွေ ရေးကြတယ်။
4.5K ဟာ မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်။ အဲလိုအမြင်သဘောထားအမျိုးမျိုး ရှိကြသူတွေ မြန်မာပြည်မှာ စုဝေးနေထိုင်ကြပါတယ်။
ည ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ်။